I-InfoGEO + InfoGNSS = MundoGEO - Geofumadas
NgoJanuwari, 2012 Geospatial - GIS, ezintsha
Ushicilelo lokuqala lwephephabhuku leMundoGEO sele lupapashiwe, njengoko besisazi ukuba iya kuba kukudityaniswa kwamaphephandaba amabini aphuculwe yile portal: InfoGEO / InfoGNSS.
Ifomathi entsha iya kuba ne-bimonthly periodicity, esiya kuthi sibe nayo okungenani iikopi ze-6 ngonyaka. Okwangoku, inguqulelo yesiPhuthukezi yenziwe yafumaneka, kodwa kuya kubakho nesiNgesi neSpanish, kulindeleke ukuba zifike ngo-Matshi. Ukongeza kwifomathi yedijithali, ifomathi eprintiweyo nayo iya kugcinwa, nangona abathengisi bengafani.
Kubonakala ngathi linyathelo elinomdla, i-MundoGEO iyakusazi isizathu sokudibanisa iimagazini ezimbini kwelinye, ngaphandle kwamathandabuzo iyakuba yimpapasho omele ngakumbi kwicandelo le-Hispanic kwindawo ye-Geo-Engineering. Ukuba kukho inguqulelo yeSpanish, sisiseko esibalulekileyo sokudityaniswa kwamanye amazwe kunye nomtsalane wamehlo eenkampani kule ndawo enokubakho okuninzi kodwa apho ukuthathwa kotyalo mali kule ndawo kuhamba kancinci.
Inqaku likaWilson Anderson Holler lisikhumbuza ukuba umhlaba awupheleli kwi-2012 kwaye olu tshintsho longezwa ekuqalisweni kwe- Geo Qhagamshela abantu Sifumana iminikelo ebalulekileyo Uluntu lwaseBrazil Kwinkqubo ye-ecosystem yasePan American.
Siyakwamkela kumagazini kwaye ngokudlulileyo sikhankanya ezinye izihloko ezitsala umdla wethu:
Ngubani Ngubani kwi-geotechnologies.
Udliwanondlebe noSantiabo Borrero Mutis, wePan American Institute of Geography and History.
Zihamba njani ii-IDE kwiLatin America.
Ukusetyenziswa kwe-GIS kuhambo lwedolophu.
Jonga iphephancwadi eMundoGEO
Imagazini ilayishwa kwiCalameo, iqonga elilunge kakhulu lokupapasha iimagazini kwifomathi yedijithali. Ukusuka apho unokukhuphela, kuhlobo lwesisombululo esiphezulu. Kulungile kakhulu ukukhutshelwa, nangona kuyinto engeloncedo lokuhamba kuba ilayishwe kwifomathi enzima, ngaphezulu kwesiqhelo uHlaziyo lweFlash luxhonywa xa ufuna ukuthumela i-pdf apho zonke izinto zikwifomathi ephezulu ye-vector.
Post edlulileyo«Edlulileyo Iimephu zamahala ezivela kwihlabathi jikelele
Post Next Ukususela ekuvaleni kweMegaupload kunye nezinye iimpawuOkulandelayo "